Nikarakara ny Hetsika Opera Tselatra Voalohany Tao Amin’ny Fivarotana Iray Lehibe Iray Ao Bishkek i Kyrgyzstan. Zavatra Nahagaga Izany. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Janoary 2016 15:38 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Български, Nederlands, Français, বাংলা, Español, English
Io tovovavy io no iray amin'ireo kintan'ilay hetsika opera tselatra vao haingana tao amin'ny Tranombarotra lehibe Frunze. Pikantsary nozaraina avy amin'ny fantsona YouTube-n'ny People of KG.
Tao anatin'ny herinandro iray raha nandeha tany anaty vaovao noho ny antony ratsy rehetra i Kyrgyzstan, dia lahatsary iray izay nipoitra tamin'ny tambajotra nanome indray antony hitsikiana ho an'ny vahoaka.
Nipoitra tao amin'ny aterineto tamin'ny fantsona YouTube-n'ny “People of KG” – vahoakan'i KG, ny Hetsika Opera Tselatra voalohany ho an'ny firenena, hetsika iray ety anaty serasera manasongadina ireo olompirenena Kyrgyz izay nahavita zavatra tsy nampoizina.
Vetivety ilay lahatsary dia norasin’ny RFE/RL :
Fiantsenana hariva miavaka tao amin'ny Tranombarotra lehibe Frunze ao Bishkek tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra, nivadika tampoka ho fampisehoana ara-kolontsaina niaraka tamin'ireo andian'olona nanao hetsika opera tselatra. Olona izay sahala amin'ny mpiantsena rehetra ihany sy mpiasan'ilay fivarotana no niredona hira tampoka, tamin'ny fampianohana ny ampahany tamin'ny operan'i Verdi, La Traviata, ho an'ireo mpividy . Ireo mpihira, avy amin'ny Kyrgyz National Conservatory, no nanao ny dokambarotra mikasika ilay fampisehoana maimaimpoana hiseho.
Tsy mahagaga, ny hetsika opera tselatra dia nanaporofo ny iray amin'ireo singa nozaraina betsaka indrindra tamin'ny media sosialy Kyrgyz tamin'ity hernandro ity. Makà minitra iray mba hijery sy hankafy!